musha nyika dzakabatana Singers Lil Uzi Vert Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Lil Uzi Vert Biography inokuudza Chokwadi nezve rake rehucheche Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki, Musikana / Wife, Net Kukosha, Hupenyu hwePamoyo uye Mararamiro.
Mumashoko akareruka, tinokupa iwe neyemuridzi memoir, kubva pamazuva ake ekutanga, kusvika paakasimuka mukurumbira. Kuti urarame hupenyu hwako hwechishuwo, heuno hudiki hwake kune vakuru gallery - chidimbu chakakwana chaLil Uzi Vert Biography.
Lil Uzi Vert's Biography: Tarisa uone pfupiso yehupenyu hwake uye Kumuka.
Hongu, munhu wese anoziva nezvechiso chake nyora, uye fashoni yemaitiro uye eccentric vhudzi, pamwe neyeye melodic emo nzira yekubata. Nekudaro, vashoma chete vateveri vemumhanzi vakaverenga nezve yake inonakidza Hupenyu Hupenyu. Nekudaro, isu tinokupa iwe neBiography yeiyo American rapper zvakadaro isingazivikanwe. Pasina kunonoka kukuru, ngatitangei.
Lil Uzi Vert Yemwana Nhau:
Mufananidzo usingawanzoitika wehudiki hwake. Ehezve, aive nekunyemwerera kwakanaka semwana mudiki anoyevedza.
Kutanga kuenda, ane zita remadunhurirwa rekuti "Lil Uzi Vert", zita rake chairo riri Symere Bysil Woods. Iyo iconic muimbi akaberekwa pazuva re31st raJuly 1994 kuna baba naamai vake muFrancisville, North Philadelphia. Anogona kunge ari iye ega mwana akazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake.
Zvinonakidza, Uzi akanakidzwa nehunhu hwakadzikama uye hwakareruka. Semwana mudiki, akadanana nerwiyo rwemumhanzi uye akasarudza kugara munzvimbo dzakanyarara achiteerera nziyo dzinonakidza. Isu tinotenda kuti mukomana mudiki akasiyana nevamwe vana vane hanya navo kwekutanga kwakanangana nemabhisikiti uye matoyi.
Lil Uzi Vert Kukura Kumusoro Mazuva:
Nerudo rwake rusingagumi rwemimhanzi, zvaive pasina mubvunzo zvakajeka izvo ramangwana rakabata Woods. Kufanana nevamwe vese vadiki vekuAmerican mwana, Lil Uzi Vert akakura achidzidza dzakawanda nziyo dze rap dzevaimbi veteran.
Mazwi haakwanise kutsanangura mufaro waanonzwa paanosimudza ruoko achipindura rwiyo runonakidza.
Pese paanochengetedza mari, yaigara iri yekutenga dambarefu. Kune zvinyorwa, aive fan guru raMike Jones naYing Yang Twins kumashure mumazuva akanaka ekare. Moreso, akashandisa chidimbu chakakura kubva paudiki hwake kuteerera nziyo dzavo.
Lil Uzi Vert Mhuri Yemhuri:
Zvinokufadza iwe kuziva kuti munyori wenziyo haana kukura akapfuma, uye haana kuzvarwa ari murombo. Akauya achibva pakati-epakati Mhuri Nhoroondo yaive neyakagadzikana zvemari. Zvirinani, Uzi mudiki aisafanira kunetsekana nekurara nedumbu risina chinhu kana kusvetuka chikoro nekuda kwenyaya dzemari.
Lil Uzi Vert Mhuri Kubva:
Sezvo dzimwe dzenziyo dzake dzakatanga kuburitsa chati, kuda kuziva maererano nedzinza rake kwakakura. Kune nyika zhinji dzemu Africa dzakatenda kuti Mhuri Midzi yeUzi yakabatana navo. Ehezve, huso hwake hunopa humbowo hwechokwadi hwekuti iye ndewekuAfrica -America.
Nekudaro, timu yedu haigone kusimbisa nyika yeAfrica yakabatana nemadzitateguru ake. Tichiongorora kwaakaberekerwa, takaona kuti Francisville inzvimbo yemuguta ine vanhu vangangoita zviuru mazana matatu nemazana matatu. Iyo ine akawanda mabhawa, kofi mashopu, mapaki nemaresitorendi uko vagari nevashanyi vanogona kuzorora zviri nyore.
Ehe, yake nzvimbo yeKutanga hakuna mumwe kunze kweUrban nzvimbo muPhiladelphia - Francisville.
Lil Uzi Vert Dzidzo:
Rwendo rwekufamba kwemunyori wenziyo rwakatanga pazera diki kwazvo. Paakasvitsa makore gumi nematatu, akapedza mazhinji mazuva ake achiteerera Meek Mill uye Wiz Khalifa. Panguva yaakapinda mugiredhi regumi, Uzi aive atanga kusheedzera nziyo zhinji dzepamusorosoro neshamwari dzake.
Sezviri pachena, vadiki vezve rap vakanyanya kukwezva Chris Brown's zviridzwa. Pamwe chete, ivo vakagadzira boka rap uye vakaritumidza Steaktown. Sezvineiwo, vashandi vakaburitsa nziyo yavo yemimhanzi vhidhiyo, iyo iwe yaunogona kutarisa pazasi.
Muna 2011, Steaktown akaputsa ndokusiya Uzi isina imwe sarudzo kunze kwekusiya chikoro. Amai vake vakapenga nesarudzo yake zvekuti vakamudzinga pamba pavo.
Lil Uzi Vert Hupenyu hwepakutanga (Basa):
Kutevera kusiiwa kwake kuchikoro, rapper ari kuuya akashanda kuchitoro cheZasi Dhora asi munguva pfupi akasiya basa mushure memazuva mana. Akaora mwoyo nekuti mhuri yake yaisakwanisa kunzwisisa zviroto nezvishuwo zvake.
Nekutenda, Uzi haana kubvumira kusanzwisisana kwake naamai vake kukanganisa ake sarudzo dzebasa. Nekudaro, akashanda pabasa rake rekutanga basa kweanenge makore matatu uye pakupedzisira akaburitsa EP yakanzi Purple Thoughtz Vol. 1 muna 2014.
Lil Uzi Vert Bio - Iyo Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Inenge mwedzi mishoma mushure mekunge aburitsa mutambo wake wekutanga wakawedzerwa, Uzi akabata pfungwa dzeavo vaviri mainstays vemaindasitiri uye vagadziri vane mukurumbira. Neraki, mugadziri Don Cannon akanzwa nzira yake panhepfenyuro yemunharaunda uye akatsvaga tarenda diki.
Sangana nemugadziri - Don Cannon - uyo akachinja hupenyu hwaUzi. Iye akadaro ane hupenyu hunhu.
Sezvaitarisirwa, Uzi akafadza Don Cannon, uyo akange asina pfungwa yechipiri yekumusaina kuchinyorwa chake cheChikemy. Pasina nguva kure, akaburitsa yake yekutanga mixtape - Uzi Chaiye - muna Nyamavhuvhu 2014. Yakanga iri nguva imwechete iyoyo apo Uzi Vert akasaina chibvumirano neAtlantic Records. Iyi nguva yakaratidza nguva hombe kwazvo yekubudirira kwebasa rake.
Tarisa uone chifukidziro chake chekutanga mixtape - Iyo Chaiyo Uzi.
Lil Uzi Vert Biography - Kubudirira Nhau:
Mumakore akatevera, muimbi anoonekera akatanga kukwira pamafungu ekuzivikanwa sezvo aiburitsa marekodhi akawanda. Chido chake chekumira pakati pezvakakurumbira mashura chakazove chaicho kana nzira yake "XO Tour Llif3" akakunda Rwiyo rweZhizha mu2017 MTV Vhidhiyo Music Awards.
Mushure memakore mazhinji ekushanda nesimba, iye akazowana mubairo mu 2017 MTV Vhidhiyo Music Music.
Pandinonyora iyi Bio, Lil Uzi Vert akaburitsa yakawanda nziyo dzinoyemurika uye akatoratidzira veteran maartist senge Lil Wayne. Chii chimwe?… XXLMAG yakaburitsa pachena kuti nzira yaUzi “Mucheche Pluto”Akabviswa pachigaro Roddy Ricch"Bhokisi”Kubva pana no. 1 nzvimbo yeSpotify's US yepamusoro makumi mashanu machati muna 50. Vamwe vese, sekutaura kwavo, inhoroondo.
Lil Uzi Vert Musikana / Wife Kuve:
Kugara wega uye kushaya wekugovana naye kubudirira kunogona kufinha. Pane ino noti, Uzi haana kana kufarira mararamiro ehupenyu hwekusaroora. Nekudaro, anga achibatanidzwa muhukama hunopfuura huviri hwatinoziva nezvazvo.
Mavambo ehupenyu hwake hwerudo akatanga paakasangana naBrittany Byrd mu2014. Kare ikako, aive nemakore makumi maviri paakange apindana nehukama hwerudo naye.
Zvinosekesa zvakakwana, Uzi akaita zvese zvinonakidza zvinhu zvinowanzoitwa nevakaroora nemusikana wake. Nehurombo, yavo yerudo nyaya haina kumira muyedzo wenguva sezvavakaparadzana mu2017.
Sangana nemusikana wake wekutanga, Brittany Byrd. Kudanana kwavo kwakaguma mushure memakore matatu ehukama hwakakomba.
Sezvakatarisirwa, kurambana kwake naBrittany kwakakanganisa hupenyu hwake hwepamoyo. Moreso, Uzi akatadza kuzvisimbisa kuda uye kuvimba nemumwe munhu zvakare. Asi kana rudo rwakarasika, zvese zvinoporesa moyo wakaputsika zvinogona chete kuva rudo. Nekudaro, Uzi akaenderera mberi nehupenyu hwake ndokutanga kufambidzana nevasikana vemuguta muimbi; JT.
Sangana nemusikana wake achangobva kuwanikwa, JT. Iye zvirokwazvo musikana akanaka.
Lil Uzi Vert Hupenyu hweMunhu:
Ehe, isu tinoziva kuti iko kwekutanga kwaunowana kubva mukunzwa zita rake remadunhurirwa mufananidzo wechiso chake chakatemwa. Kufanana Post Malone, mafeni mazhinji akarongedza hunhu hwake zvichibva pakuboora kwake uye pfungwa yemafashoni. Zvisinei, hupenyu hwepamoyo hwaUzi hunopfuura kungoonekwa kwake.
Ndichiri kutsvagisa Bio yake, takaona kuti muimbi wacho ane alejer kune chokoreti. Moreso, chipo chake chekugona kutaura chinoratidza kuti akagara nhaka yeiyo Leo zodiac hunhu. Unoziva here?… Basa guru raUzi rinosanganisira kutsvedza nebhasikoro rine mavhiri mana. Isu takagadzirira vhidhiyo inoratidza zvishoma zve mashandisiro aanoita nguva yake yemahara. Dyisa ziso rako nekudzvanya clip iri pazasi.
Lil Uzi Vert Mararamiro:
Kune mumwe munhu akarasikirwa nekuvimba kwemhuri yake yese achivavarira kubudirira, zvakanaka kuti anakirwe nezvibereko zvebasa rake. Ehe, rapper akagadzira mari inokwana kuisa yake 2021 Net Worth pamari inofungidzirwa yemadhora 19.5 mamirioni.
Sezviri pachena, anorarama hupenyu hwoumbozha. Chirevo chine icho icho akatyora bhangi mukutora Floyd Mayweather's Bugatti pazuva rake rekuzvarwa makumi maviri nemashanu (muna 2019). Ehe, Uzi zvakare ine dzimwe dzakawanda mota dzekunze uye dzimba dzakanaka kuzita rake.
Zvinotoshamisira kuti anosvika pakuenda kuBugatti iyi pamwe nedzimwe mota zhinji dzekunze.
Lil Uzi Vert Hupenyu Hwemhuri:
Dzimwe nguva mhinduro dzisina kunaka dzinogona kuve kukurudzira kwakanaka kune kukuru kunaka. Ndozvakaitika kuna Uzi, amai vake vakanga vasingagutsikane nechido chake mumimhanzi. Muchikamu chino, tichaburitsa pachena zvinonakidza nezvemhuri yaUzi.
Nezve Baba vaLil Uzi Vert:
Kubva kubva paudiki hwake kusvika zvino, murwi wemhare haana kuwana nguva yakawanda nababa vake. Kunyangwe chikonzero chekusavapo kwababa vake chiri chisina kujeka, runyerekupe rune kuti vabereki vaUzi vakaparadzana achiri mukomana mudiki. Mufananidzo uri pazasi wakakwezva kutarisisa kwevazhinji vevateveri vake. Vanogona here kuva baba vaUzi Vert?
Vanhu vazhinji vaitenda kuti murume kunze kwaUzi ndibaba vake. Isu tinovimba chokwadi pamusoro pezvavanotaura chinozosimbiswa nekukurumidza sezvazvinogona.
Nezve Amai vaLil Uzi Vert:
Pakave nekusava nechokwadi kwakanyanya pamusoro paamai vake. Mu2017, zvakange zvichitaurwa kuti Uzi Vert ndiye mwanakomana wemukadzi rapper - Khia - uyo vateveri vazhinji vaitenda kuti vakamupa pachivande kuti agamuchire. Pazasi pane mufananidzo wemuimbi uyo vazhinji vaiti ndivo amai vaUzi.
Sangana naKhia uyo anonzi anonyeperwa kuve amai vake.
Inguva chete ndiyo ichaudza kana makuhwa ari echokwadi kana kwete. Zvisinei, Uzi aivewo nekudonha kubva kumukadzi waanoti amai. Akamutumira kure nemba paakatenda kuti anga asiri kuita zvakanaka nebasa rake. Hatina chokwadi kana Uzi naamai vake vakayanana.
Nezve hama dzaLil Uzi Vert:
Hupenyu hungadai hwaive hunogutsa kana Uzi aine hama kana hanzvadzi yekushandisa pfuma yake naye. Zvinosuruvarisa, haana mumwe watinoziva nezvake. Kunyange zvakadaro, akazvikomberedza neshamwari dzakavimbika dzinozomubata zvakanaka sekunge vaive vanin'ina vake.
About Lil Uzi Vert's Hama:
Humwe hunhu husingakanganwike muHupenyu Hwake Nyaya ndiambuya vake. Mushure mekunge amai vaUzi vamudzinga maari, munhu mumwechete waakaramba akamunamatira panguva yakaoma kudai aive gogo vake. Akamugarisa uye akapa zvese zvaaida asati awana kugadzikana kwemari.
Chokwadi, aive iye akakodzera ngirozi inomuchengeta iyo yakamubatsira kuzadzisa zviroto zvake. Panguva yekutsikisa Bio iyi, hapana ruzivo pamusoro pasekuru vaUzi nedzimwe hama.
Lil Uzi Vert Chokwadi:
Kuputira Bio yemuimbi, hezvino zvishoma nezve iye izvo zvaizokubatsira iwe kuti uwane ruzivo rwakazara nezve Hupenyu Hwake Nyaya.
Munguva yebasa rake rekutanga neSteaktown, Uzi akatanga aine zita rechitambo "Sealab Vertical“. Sezvineiwo, akasangana nevamwe vevateveri vake avo vakatsanangura kuyerera kwake kuyerera kunge kuchikurumidza kunge pfuti yemushini. Ichi chiitiko chese chakamutungamira kuti atore zita remadunhurirwa - Lil Uzi Vert.
Chokwadi # 2: Chokwadi nezve Lil Uzi Vert Chitendero:
Isu tese tinoziva kuti Uzi ari pakati pevanotungamira vanokakavara maartist kana zvasvika panyaya yekutenda. Muchokwadi, vanhu vazhinji vanomupomera semusatanist nekuda kwekuti anonongedzera sei mifananidzo yaSatani mumumhanzi wake uye aesthetic.
Mamiriro acho ezvinhu akatobuda kunze apo Uzi Vert akasimudzira Satanism pasocial media platform yake. Izvi zvakafanirwa rekodhi rekodhi kubvisa yake Instagram kuwana kubva kwaari. Vhidhiyo iri pazasi inoratidza mafeni paakakanda bhaibheri kwaari panguva yemamwe emakonzati ake.
Chokwadi # 3: Akashata Lil Uzi Vert Tattoos:
Unoziva here?… Chimwe chezita rake guru muna 2021 idhayamondi gumi-karati yepingi yaakaisa pahuma yake. Ehe, muimbi ane tarenda haagutsikane nematatoo mazhinji aanga ainikira paganda rake.
Ehe! Chiso chake icho chaiva nedhaimani rakabatanidzwa machiri chinomira kunze mune fashoni yake.
Nekudaro, akatenga ngoda yaikosha madhora makumi maviri nemana kubva kuna Elliot Eliantte, iyo yaakange aisa mumusoro wake. Pandinonyora iyi Hupenyu Hupenyu, Uzi ane maTatoo makumi mashanu nemashanu pamuviri wake. Ingori nyaya yenguva asati apfuura 24ix54ine munyika yeinking.
Chokwadi # 4: Kuda KwaFutsal:
Kutevera kuburitswa kwake kwakasarudzika kunzi "Futsal Shuffle", Uzi akapedzisira aratidza kufarira kwake mutambo wakanaka. Sezvineiwo, rwiyo rwake rwakasimudza mibvunzo yakawanda yekuda kuziva nezvaFutsal. Izvi zvakabatsira kujekesa vanhu vazhinji nezve kuvapo kwemutambo. Izvo zvese nekuda kwaUzi Vert izvo Futsal ikozvino yave kuwana kutarisirwa kwakakodzera.
Zita rizere: Symere Bysil Woods
Mazita emazita: Sealab Vertical
Nzvimbo yekuzvarirwa: Francisville, North Philadelphia
Musikana / Wawakaroorana naye: Brittany Byrd (aimbova-Musikana)
JT (iyezvino musikana senge pa2021)
Net Worth: $ Miriyoni makumi maviri (19.5)
Hobby: kukukurwa neine-mavhiri bhasikoro
Kwemakore, Lil Uzi Vert akaratidzira pfungwa yepamusoro yetariro. Kutanga, haana kubvumira kushushikana kukanda muhupenyu hwake amai vake pavakamurasa. Chechipiri, haana kumboburitsa chero mazwi anotyisa kana kurega kuita kwake apo vateveri vake vakamukanda bhaibheri kwaari vakamudaidza kuti dhiabhori.
Nedambudziko rega rega rinonetesa, muimbi akaisa musoro wake akatarisa uye akafunga mukana wekuwana budiriro. Tinotenda kuna mbuya vake, avo vakatsigira zviroto zvake apo vese vabereki vake nemhuri yavo vakamusiya. Kuedza kwake ndicho chikonzero ari kubudirira nhasi.
Tinokutendai nekuverenga yedu Lil Uzi Vert Yemwana Nhau uye Biography Chokwadi. Ndokumbirawo uite zvakanaka kuti utibata nesu kana iwe ukawana chero chinhu chinoita senge chisiri chakakodzera nenyaya yedu
Dai 23, 2021